Office yeMac yakagadziridzwa kuwedzera rutsigiro ruzere kuICloud uye Yahoo maakaunti | Ndinobva mac
Kunyangwe Yahoo yakamira kuve internet hofori yakave makore mazhinji apfuura muma2000, mushure mekutengeswa kwayo kuVerizon muna2018, kambani iri kuenderera mberi nekupa akati wandei masevhisi senge tsamba. Yahoo, senge Gmail neAptlook, zvinopa chete email, asi zvakare kutaurirana uye karenda kuwiriranisa, seICloud.
Nekudaro, iyo Outlook yeMac application, iyo chete yakapa mukana wekuwana Yahoo! uye iCloud email maakaunzi kwete kune yayo yese chikuva, ndiko kuti, kutaurirana uye karenda. Asi neinotevera yekuvandudza, Outlook yeMac email maneja inozopedzisira yapa yakazara rutsigiro rweICloud uye Yahoo maakaundi.
Kubva pakutanga zano redu rave rekuvaka yakasarudzika Outlook ruzivo rwakavakirwa pakanangana nemhinduro kubva kwauri, isu vashandisi. Takanyatsoteerera pane zvavanotaura, uye kubva munaGunyana, takawedzera zvinopfuura makumi mashanu zvezvinhu zvakakumbirwa zvakanyanya kuAptlook yeMac, kusanganisira rutsigiro rwemamwe maakaundi account, zvigadziridzo zvekuchengetedza, uye dzimwe nzira dze gara pamusoro pezvinhu. yako karenda. Mhinduro yakakosha yatakatambira yakatibatsirawo kugadzirisa zvatinokoshesa
Iyi haisiriyo yega nyaya iyo Hofisi yagashira neyekuvandudzwa kwazvino, nekuti izwi rekuti processor Izwi rakagamuchirawo yakagadziriswa dhizaini chiitiko nebara nyowani rekutaurisa mukuwedzera pakuvepo basa iri mune mimwe mitauro.
Kufungidzira iko zvino kwave kuwanikwa mune mimwe mitauro. Nekuwedzera kwemimwe mitauro, vatauri vakawanda vanobva pasirese vanogona kushandisa kutaura-kune-zvinyorwa chinhu. Kufungidzira ikozvino kwatsigira mitauro minomwe mitsva: Hindi, Russian, Polish, Portuguese (Portugal), Korean, Thai, uye Chinese (Taiwan).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Hofisi yeMac yakagadziridzwa kuti iwedzere rutsigiro ruzere kuacloud uye maYahoo account